China Cacys Revoluta Nkwụ osisi na ndị na-emepụta | Anwụ na-acha Ifuru
Cacys Revoluta Nkwụ Osisi
Cycas revoluta bụ ụdị osisi ịchọ mma mara mma. A na-azụlite ya ebe niile. Oge cycad dị ihe dị ka afọ 200, enwere ike ịsị na ọ dị ogologo. Na mgbakwunye na ogologo ndụ, cycas bụ onye a ma ama maka ifuru ya, nke a na-akpọ "ifuru osisi ígwè". Azuokokoosisi nwere stachi na oriri; mkpụrụ ndị ahụ nwere mmanụ na starch bara ọgaranya, bụ nke na-egbu egbu. A na-eji ha maka nri na ọgwụ, ma nwee mmetụta nke ịgwọ ọnyụnyụ ọbara, belata ụkwara na ịkwụsị ọbara ọgbụgba.
Otu isi cycas na-agbanwe agbanwe
Multi-isi cycas agba
Iferi gbanyere mkpọrọgwụ na coco peat ma ọ bụrụ napụta na Mgbụsị akwụkwọ na mmiri.
Potted na koko peat na oge ọzọ.
Gbanye na igbe igbe ma obu igbe osisi.
Kpọọ ala:Nke kacha mma bụ tụụrụ aja loam. Ngwakọta agwakọta bụ otu akụkụ loam, akụkụ 1 nke kpokọtara humus na akụkụ 1 nke uyi coal. Gwakọta nke ọma. Kinddị ala a tọgbọrọ chakoo, na-eme nri, na-emebi emebi, na-adabara eto nke cycads.
Prun:Mgbe azuokokoosisi ahụ toro ruo 50 cm, ochie epupụta kwesịrị ebipụ ke ini utọ, wee bee otu ugboro n'afọ, ma ọ bụ ọ dịghị ihe ọzọ otu ugboro kwa afọ 3. Ọ bụrụ na osisi ahụ ka dị obere na ogo nke mkpughe adịghị mma, ị nwere ike belata akwụkwọ niile. Nke a agaghị emetụta akụkụ nke akwụkwọ ọhụrụ ahụ, ma mee ka osisi ahụ zuo oke. Mgbe ị na-akwacha, gbalịa igbutu ala nke petiole ahụ iji mee ka azuokokoosisi ahụ mara mma ma mara mma.
Gbanwee ite:Pottes Cycas kwesiri dochie anya opekata mpe otu ugboro n’afọ ise ọ bụla. Mgbe ị gbanwere ite ahụ, a ga-agwakọta ala ite ahụ na fatịlaịza phosphate dị ka nri ọkpụkpụ, na oge maka igbanwe ite ahụ bụ ihe dịka 15 ℃. N'oge a, ọ bụrụ na uto ahụ siri ike, ụfọdụ mgbọrọgwụ ochie kwesịrị iwepụ n'ụzọ kwesịrị ekwesị iji kwado uto nke mgbọrọgwụ ọhụrụ n'oge.
Osote: Nkịtị ịchọ mma Bonsai Carmona Microphylla